नेपाल यतिखेर चीनको खुलापन तथा सुधार लागू हुँदा ताकाको जस्तै अवस्थामा छः विदेश मामिला निर्देशक छियाङ | News Polar
नेपाल यतिखेर चीनको खुलापन तथा सुधार लागू हुँदा ताकाको जस्तै अवस्थामा छः विदेश मामिला निर्देशक छियाङ
सम्यक शाह बैशाख २९, २०७८, बुधबार
सन् २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणमा शाङ्सी प्रान्तीय सिआन जनसरकार, वैदेशिक मामिलाका निर्देशक छियाङ् शङ् पनि नेपालमा जाँचोपाँजो मिलाउने हेतुले पहिलो पटक काठमाडौं उत्रिएका थिए। लामो समयदेखि नेपाल र चीनबीच हातेमालोमा संलग्न उनले आपसी सहयोगका थुप्रै संभावनाहरू देखेका छन्।
नेपाली नयाँ वर्ष २०७८ का उपलक्ष्यमा बेइजिङस्थित नेपाली राजदूतावासले आयोजना गरेको शुभकामना कार्यक्रममा सहभागी हुन सिआनबाट बेइजिङ आइपुगेका बेलामा निर्देशक छियाङ शङसँग गरेको कुराकानीको अंश
पहिलो पटक नेपाल जाँदा कस्तो लाग्यो ? चीन र नेपालबीचको सम्बन्धलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
नेपाल चीनको एउटा निकै महत्वपूर्ण छिमेकी हो। नेपाल र चीनको सिआनबीचको आदानप्रदानको इतिहास निकै पुरानो छ। सिआनले नेपालको बौद्ध धर्मबाट धेरै नै बुझेको छ। विगतमा हामीले थाहा पाएका थियौं कि नेपाल सांस्कृतिक रुपले निकै समृद्ध मुलुक हो। आपसमा हिमालहरू भएपनि नेपाल र चीनबीचको मित्रता हिमाल भन्दा पनि उँचो छ। म पहिलो पटक नेपाल जाँदाको भावना कस्तो छ भने अति वास्तविक र आत्मीय।
नेपाल पनि चीनको खुलापन तथा सुधार लागू हुँदा ताकाको जस्तै अवस्थामा छ। चीन र नेपाल सरकारदेखि जनता जनताबीचको सम्बन्ध स्तरबाट हेर्दा नेपाल एउटा ठूलो विकासको मार्गमा छ। नेपालमा स्थिर सरकार होला र हालको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले नेपाली जनताका लागि धेरै उपलब्धी हासिल गर्नसक्ला भन्ने अपेक्षा छ। पश्चिमा मुलुक वा अन्य देशबाट देख्न नसकिने आत्मीयता नेपालीहरूमा छ।
सर्वसाधारणको जीवनस्तर उकास्नका लागि प्रयास गरिरहेको नेपाल उतिबेलाको सुधार तथा खुलापनको चरणमा रहेको चीनको जस्तै अवस्थामा छ कि जस्तो भान हुन्छ। नेपाल भित्र प्रवेश गर्दाको क्षण युरोप अमेरिकाको भन्दा पृथक छ जुन अनुभव ती मुलुकहरूमा हुनसक्दैन। नेपालप्रतिको मेरो भावना एकदमै गहिरो रहेको मलाई लाग्छ। नेपालमा निकै आफ्नोपनको महसुस भयो, आफ्नो घरमा गएजस्तो।
युरोप अमेरिकामा विकास होला तर नेपालको जस्तो आफ्नोपना देखिन। राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणको अघिल्लो दिन काठमाडौं उत्रिएको थिएँ। बुटवलसँग सिआनको भगिनी सम्बन्ध स्थापनाको चाँजोपाँजो मिलाउनु थियो। सी बेइजिङ फर्किएको भोलिपल्ट म पनि चीन फर्किएको थिएँ। बुटवलमा विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाउन लागिएकोले सिआनका लगानीकर्ताहरूलाई काठमाडौ बाहिर बुटवलतिर लैजान प्रोत्साहन गरेको छु। त्यो छिट्टै हुन्छ भन्ने लागेको छ।
सिआन सहरले नेपालका विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्ति दिने विषयमा के प्रगति भइरहेको छ ?
सन् २०१८ मा ट्रान्स हिमालयन फ्रेण्डसीप नामक संस्थासँग सम्झौता गरेर २० जना नेपाली विद्यार्थीहरूलाई रेलवे सम्बन्धी प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्न थालिएको हो। सन् २०१९ देखि यो सम्झौता कार्यान्वयनमा आइसकेको हो। बीचमा कोरोना महामारीले अवरोध गरेपछि नेपाल फर्किएका विद्यार्थीहरू अनलाइनबाट पढिरहेका छन्। चीनको रेलवे सेवाका लागि ४० प्रतिशत जनशक्ति यही सिआन रेलवे कलेजबाट उत्पादन हुन्छ। कोरोना महामारी रोकिएपछि यो क्रमलाई निरन्तरमा दिइनेछ। २०२० मा चाहिं महामारीका कारण हामी आफैंले यसलाई निरन्तर गर्न सकेनौ।
के छ भने सिआन सहरले प्रति महिना छिमेकी मुलुकहरू, बेल्ट एण्ड रोडसँग आवद्ध मुलुक र क्षेत्रहरू तथा महत्वपूर्ण मुलुकका विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति दिने गरेको छ। हाम्रो नेपालसँगको सहकार्य निकै प्रचूर छ। किनभने नेपालको काठमाडौ र सिआन सहरबीचमा भगिनी सहरको नाता छ। साथै नेपालको धुलिखेलसँग पनि आत्मीय सम्बन्ध छ। एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संगठनको उपाध्यक्ष पद जित्नका लागि धुलिखेलका मेयरले हामीलाई भोट हालेका थिए। यो भावनात्मक सम्बन्धको उपज हो।
राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणमा भएको २० बुँदे संयुक्त समझदारीपत्रमा पनि बुटवल र सिआनबीचमा भगिनी सम्बन्धका कुराहरू छन्। त्यसबाट बुटवलप्रतिको हाम्रो दायित्व अझ बढी छ। बुटवल उपमहानगरपालिकाले सिआनमा एउटा सानो बुद्ध मूर्ति स्थापना गर्ने र निर्माणस्थल हामीले उपलब्ध गराउने अनि हामीले बुटवलमा ठूलो बुद्ध मूर्ति उभ्याउने, त्यसको लागि स्थल व्यवस्थापन बुटवलले गर्ने कुरा छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीको सन् २०१६ र २०१८ को चीन भ्रमणमा कृषि क्षेत्रमा लगानी लागि कुरा उठेको थियो। सोही बमोजिम के गर्न सकिन्छ भनेर बुझिरहेका छौं।
त्यसका अलावा सिआन र नेपालबीचको शैक्षिक तथा मेडिकल आदानप्रदानको भविष्य पनि ठूलो छ। इतिहासकालदेखि नै नेपाली तथा चिनियाँ विद्वानहरू अझ विशेषगरी सुआन चाङ देखिका भिक्षुहरूले पनि आदानप्रदान गर्दै ठूलो सहायता बाँडीचुँडी गरेका छन्। हाल सिआन युनिभर्सिटीले बताए अनुसार नेपाली विद्यार्थीहरू तुलनात्मक रूपमा निकै मेधावी र मेहनती छन्।
यो कोरोना महामारीको अवधिमा पनि अनलाइन कक्षा चलाउँदाखेरि नेपाली विद्यार्थीहरूले निकै मेहनतका साथ अध्ययन गरेको शिक्षकहरू बताउँछन्। अझ अर्को कुरा के भने नेपालले पनि ठूला परियोजना निर्माणका लागि प्रयास गरिरहेको छ। साथै रेलमार्गको निर्माणका लागि पनि धेरै प्रगति उन्मुख भएको छ। आदानप्रदानको गति अटुट रुपमा चल्ने अपेक्षा छ।
आगामी दिनमा नेपाल र चीनबीचमा सहकार्य गर्न सकिने कुनै परियोजना छन् कि ? जस्तो कि नेपालको महामारी प्रतिरोधमा चीनको सहयोग छ। अरू के कस्ता क्षेत्रहरू सहयोग आदानप्रदानका लागि हुनसक्लान् ?
चीनमा महामारी देखिएका बेला नेपाली मित्रहरूले शीघ्र रुपमा महामारी नियन्त्रणका लागि निकै न्यानो सन्देश पठाएका थिए। केही सहयोगी सामग्री र मास्क पनि पठाएर सहयोग गरेका थिए। पछि नेपालमा महामारी फैलिएपछि सिआनले पनि नियन्त्रणका केही उपकरण सहायता गरेको थियो। यो पनि सहयोगको एउटा पाटो थियो।
मलाई लाग्छ भविष्यमा दुई देशबीच सहकार्य गर्न सकिने संभावनाहरू धेरै छन्। नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सिआनको भ्रमणका क्रममा भन्नुभएको थियो कि चीन र नेपालबीचको मित्रताको इतिहास निकै गहन छ। हो, चीनको थाङ राजवंशकालमा महान भिक्षु सुआन चाङले नेपालको लुम्बिनी भ्रमण गरे।
नेपाली राजकुमारी भृकुटी र चीनकी राजकुमारी वन चङले तिब्बती राजा स्रङचङ गम्पोसँग वैवाहिक सम्बन्ध गाँसेकाले नेपाल र चीनबीचमा मित्रता मात्रै होइन, नाताकुटुम्ब पनि छ।
त्यसैगरी युआन राजवंशकालमा फा सियानजस्ता विद्वानहरू बुटवल हुँदै लुम्बिनीमा अध्ययन गरी भारतबाट बुद्धसूत्र लिएर चीन फर्किएका थिए। त्यसैले बुद्ध धर्मको चीन प्रवेश गर्ने माध्यम नेपाल नै थियो। हामी भन्न सक्छौं, परम्परादेखि नै निकै आत्मीय मित्रता नेपाल र चीनबीचमा थियो। मञ्जुश्रीले काठमाडौं उपत्यका बनाए र अरनिकोले चीनमा श्वेतचैत्य बनाए। रिसर्च गर्दै जाने हो भने नेपाल चीन सम्बन्ध अहिलेको होइन, धेरै पुरानो हो।
अब त, सन् १९७८ मा चीनको सुधार तथा खुलापन शुरू भएकाले हामीसँग धेरै अनुभवहरू पनि छन्। नेपालको विकासको क्रममा यो अनुभव सरकार र जनतामाझ पनि उपयोगी हुनसक्छ। आशा गर्दछु, नेपालबाट धेरै साथीहरू सिआन आउनुहुनेछ र हेर्नुहुनेछ।
# छियाङ् शङ्
प्रकाशित : बैशाख २९, २०७८, ११:३३:३०